Tetikasa Fafy – Fahasalamana: fitaovana mitentina 2 tapitrisa dolara avy amin’ny OMS | NewsMada
Notanterahina, omaly teny amin’ny INSPC Mahamasina, ny lanonana fanomezana ireo fitaovana ilaina entina hiadiana amin’ny fahataran’ny fitomboan’ny zaza ao anatin’ny tetikasa Fanjarian-tsakafo sy fahasalamana ifotony (Fafy) notarihin’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Tetikasa iarahana amin’ny OMS sy ny Unicef ary ny Banky iraisam-pirenena ny Fafy ka tanjona ny fampidinana ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Nanolotra bisikileta 1 451 sy finday 1 500 ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana misahana ny fahasalamana (OMS) ampiasain’ny mpanentana eny ifotony hiasa amin’ny distrika 46. “Miasa amin’ny toerana saro-dalana ny ankamaroan’izy ireny ka fitaovana hanampy amin’ny fampitam-baovao haingana isorohana ny valanaretina ny tanjon’ny fampitaovana”, hoy ny solontenan’ny OMS eto amintsika.
Manampy ireo koa ny “tablette” apetraka eny amin’ny CSB 2 800 manerana ny Nosy, efa misy 1 200 naparitaka eny amin’ny tobim-pahasalamana ka ny1 600 fanampiny sy ny kojakoja miaraka aminy no naseho omaly.
Ho an’ny amin’ny aretina pesta manokana, nahazo fitaovana famandrihana voalavo ny minisiteran’ny Fahasalamana. Ary ho fitsinjovana ny vehivavy, nampiana telo ny fitaovana “cryothérapie” ka 16 izany ireo efa miasa amin’izao fotoana izao hisorohana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza. Mitentina 2 tapitrisa dolara mahery ny fitaovana natolotry ny OMS, omaly. Voalaza ihany koa fa hisy ny fankasitrahana omena an’i Madagasikara noho ny ezaka nataony eo amin’ny sehatry ny fahasalamana. Nanamarika ny filoha fa hametrahana fitaovana fanaovana dialyse ny hopitaly ho fanampiana ny vahoaka.